China Monkey gosiputara ntupu, ulo oru ntupu na ndi n’enye ha | Nnukwu mgbochi
Usoro ihe eji eme ihe ngosi nwere ihe eji eme ka igwe anaghị agba nchara eriri eriri nke eriri igwe na-akwado nke siri ike n ’igwe mgbaaka na - eme ka enwee uzo .Ọ bu echiche ohuru ohuru iji nye ndi mmadu nlere anya nlele 360 ​​ebe ị na --eme ebe nchekwa karie.
Igwe eriri igwe anaghị agba nchara nwere ọtụtụ njiri mara, na -eme ka ọ bụrụ ihe zuru oke maka ntupu enwe enwe, dị mma maka nnukwu, ọkara na obere enwee, etinyere na ntuputa enwe enwe, ihe ngosi enwe, onu enwe, ogwe enwe, anụ enwe enwe.
A na-eji ụgbụ igwe akwa igwe igwe anaghị agba nchara ma jiri eriri waya nchara rụọ ya. Nke a bụ ụgbụ a na-agbanwe agbanwe nke na-apịaji ma na-agbanwe agbanwe, ma nwee ike ịkpụ ụdị ọkpọkọ n'okpuru nkwado nke mgbanaka ọla okirikiri.
Igwe achara na akwa igwe anaghị agba nchara, ụgbụ ọwara na-ejikarị ụdị ụdị enwe, ọkachasị obere na nnukwu anụ. Ihe dayameta nke akwa ahụ bụ ihe dịka 75 cm, ebe dị anya n'etiti mgbanaka ọla bụ ihe dịka 200 cm. Nkọwapụta ngwaahịa ngwaahịa nke Monkey Tunnel Mesh na-ejikarị bụ GP1651, GP2051 GP2476, wdg, na nkọwapụta ngwaahịa nke Tiger Tunnel Mesh na-ejikarị bụ GP3251, GP3276, wdg.
Nke gara aga: Aluminom yinye nko
Osote: Ihe eji eme ka igwe anaghị agba nchara anaghị adị ọcha
Anyi gosiputara ntupu
Akpụkpọ ọkụ igwe anaghị agba nchara eriri igwe (Inte ...